Xildhibaan sheegay in uu maxkamad la tiigsan doono wasiirka arrimaha dibadda, kana tashan doonaan aayahooda – Kalfadhi
Xildhibaan Idiris Cabdi Dhaqtar oo ka tirsan Golaha Shacabka ee baarlamaanka 10-aad, ayaa sheegay in uu maxkamad la tiigsanayo Wasiirka Arrimaha Dibadda Maxamed Cabdirisaaq Maxamuud Abuubakar, kaddib markii uu ku eedeeyay in Wasiirka uu is hortaagay in 20 xildhibaan loo cusbooneysiiyo baasabooradooda, si ay u safraan.
Xildhibaanka oo eedo culus jeediyay ayaa ku nuux-nuuxsaday in xildhibaannada kasoo jeeday deegannada maamulka Koonfur-Galbeed si gaar ah loo beegsanayo, isagoona wacad ku maray in maamulka Koonfur-Galbeed uu ka tashan doono aayihiisa, haddii ay arrimahan oo kale sii socdaan.
“Anniga shaqsiyan waa in maxkamad aan la tiigsado maxaa yeelay warqad ayuu markii hore soo qoray oo uu ku fasaxayo in baasaboorada la siiyo xildhibaannada, kaddibna uu warqad kale kasoo daba qoray oo uu ku xanibayo baasaboorada xildhibaannada.
“Talaabadaasi waa qalad waxaana ka xignaa dagaal. Haddii ay sidaan kusii socoto waxaa ballan idinka qaadayaa in aan Soomaali ka go’no. Midnimo Soomaaliyeed ayaan raadineynay laakiin waxaa midnimo noo diiday qaar kamid ah qabaa’ilada, ilaa laga helayo midnimo Soomaaliyeed waa in aan ka tashano aayaheena. Ma jiro hal qof oo ka soo jeeda deegaannada Koonfur-Galbeed oo soo raadsan karo baasaboor”.
Xildhibaan Idiris Cabdi Dhaqtar ayaa shirkiisa jaa’iid ku sheegay in ay dacwad gaarsiiyeen Guddoomiyaha Golaha Shacabka Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan.
Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Xukuumadda Federaalka Maxamed Cabdirisaaq Maxamuud Abuubakar oo howlo shaqo u jooga dalka Mareykanka ayaana wali ka hadlin eedeynta uga timid Xildhibaan Idiris Cabdi Dhaqtar oo ka tirsan Golaha Shacabka ee baarlamaanka 10-aad.